४४ बर्षको मानिसलाई ५० भन्दा बढी महिलाबाट सेक्सको अफर !
स्कटल्याण्डका ४३ बषीय मोहम्मद अबद अहिले ४४ बर्षका भए । उनले सानै छँदा दुर्घटनामा परी आफ्नो लिङ्ग गुमाएका छन् र अहिले कृत्रिम लिङ्ग हालेका छन् । उनै अबदलाई ५० भन्दा बढी महिलाबाट सेक्सको अफर आईसकेको छ । खासमा उनले जोडेको कृत्रिम लिङ्गको अनुभव लिन उनलाई थुप्रै महिलाको यौनसम्पर्कको प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले जोडेको बायोनिक … Read more
भारतको राजस्थानस्थित मारवाडमा एउटा अनौठो उत्सव मनाइन्छ । धींगा गवर भनिने उक्त उत्सवमा निकै अनौठो परम्परा निर्वाह गरिन्छ । जसमा अविवाहित युवतीहरुले अविवाहित युवकहरुलाई लखेटी लखेटी लठ्ठीले कुट्छन् । यसरी लठ्ठीले कुटिने युवकको बिहे पक्का हुन्छ । गवर मातालाई गाउँलेहरुले पार्वतीको रुपमा पूजा गर्दछन् । उक्त परम्परामा अविवाहित युवतीका साथै नवविवाहिता तथा विधुवा महिलाहरुले पनि … Read more
दुनियाको अनौठो होटल: सिंहसँग ब्रेकफास्ट, भालुसँग लञ्च !
हिंश्रक जंगली जनावरको आमने सामने हुँदा होसहवास उड्नु स्वभाविकै हो । तर अस्ट्रेलियामा यस्तो ठाउँ छ जहाँ तपाइँ यी जंगली जनावरसँगै बस्न सक्नुहुन्छ, नजिकै बसेर भोजन गर्न सक्नुहुन्छ । कल्पना गर्नुस् त, तपाइँ नाश्ता गरिरहनुभएको छ र तपाइँलाई नजिकै बसेको सिंहले हेरिरहेको छ । बाथरुममा नुहाइरहनु भएको छ र तपाइँको नजिकै भालु घुमिरहेको छ । … Read more
बेलायतको क्याबिनेटमा बिरालोलाई सरकारी जागिर !
अब बिरालोको काम केवल मुसा मार्नेमै मात्र सीमित छैन । यो दुनियामा बिरालोले पनि सरकारी जागिर खाँदैछ । एकातिर डिग्री पास गरेका मानिसहरू समेत बेरोजगार भएर हल्लिरहनुपरेको छ भने अर्कोतिर बिरालोले समेत सरकारी जागिर पाउने भएको छ । बिरालोकै कारण मानिसले जागिर गुमाउने स्थिति पनि आइलागेको छ । तर चिन्ता नगर्नुस् बिरालोले सरकारी नोकरी खान … Read more